Isku-duwaha internetka ee bilaashka ah ee xogta GIS - CAD iyo Raster - Gofumed
Febraayo, 2014 Geospatial - GIS
MyGeodata Converter waa adeeg internet oo fududeeya is-beddelka xogta u dhexaysa noocyada kala duwan.
Hadda adeeggu wuxuu aqoonsadaa qaababka wax soo saarka ee 22:
DGN Microstation (version 7)
X-Qorshaha / Xogta Aeronautical data
Iyo taageerada ugu yaraan Foomamka Codbixinta 8:
Ku daray dhammaan isku-dhafka suurtogalka ah ee qaababkii hore ee jira waxaa ka badan noocyada beddelka 200. Liisaska dhibcaha, waxay u dhaqmaan sida
Isku-Duwaha Iskuduwida Bilaashka ah
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan adeeggan waa fursadaha waxqabashada wax kabadal ah.
Waa suurtogal in la doorto magaca lakabka wax soo saarka,
Sidoo kale haddii file talooyin ku leedahay lakabyo kala duwan sida file arc-Guntin ama nooca ArcInfo DGN, waxay muujinayaan kartaa layers kuwan,
Haddii ay dhacdo in lakabyada hoose, waxaad qeexi kartaa sifooyinka lagu darayo ama lagu soo saaro beddelaadda,
Waxaad codsan kartaa bayaannada sirta ama shaandhada shuruudaha,
Waxaa intaa dheer, waxaa jira macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida laybereeriga isdhaafsiga u shaqeeyo.
Xaaladda Dib-u-noqoshada Raster waxay u oggolaataa soo-saaridda qaybta.
Sida iskudubarida nidaamyada, waxaad dooran kartaa liistada leh xaqiijin hore. Waxa kale oo suurtogal ah in la raadiyo code EPSG ama keyword:
WGS 84, EPSG 4326 (World)
Google Mercator oo kala duwan, EPSG 900913 (Worldwide)
NAD27, EPSG 4267 (Waqooyiga Ameerika)
NAD83, EPSG 4269 (Waqooyiga Ameerika)
ETRS89 / ETRS-LAEA, EPSG 3035 (Europe)
OSGB 1936 / Qorshaha Qaranka Ingiriiska, EPSG 27700 (UK)
TM65 / Irish Grid, EPSG 29902 (UK)
ATF (Paris) / Nord de Guerre, EPSG 27500 (Faransiis)
ED50 / France EuroLambert, EPSG 2192 (Faransiis)
S-JTSK Krovak East North, EPSG 102065,102067 (Czech Republic)
S-42 (Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 3), EPSG 28403 (Czech Republic)
WGS 84 / UTM 33N, EPSG 32633 (Czech Republic)
MGI / Austria lambert, EPSG 31287 (Awstaria)
Amersfoort / RD New, EPSG 28992 (Netherlands - Netherlands)
Belge 1972 / Belgian Lambert 72, EPSG 31370 (Belgium)
NZGD49 / Khariidadda New Zealand Khariidadda, EPSG 27200 (New Zealand)
Pulkovo 1942 (58) / aagga Poland I, EPSG 3120 (Poland)
ETRS89 / Poland Goobta CS2000 5, EPSG 2176 (Poland)
ETRS89 / Poland Goobta CS2000 6, EPSG 2177 (Poland)
ETRS89 / Poland Goobta CS2000 7, EPSG 2178 (Poland)
Pulkovo 1942 (58) / Gauss-Kruger zone 3, EPSG 3333 (Aleania, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia)
Marka la soo gaabiyo, adeeg weyn oo qiimo leh oo la tixgelinayo. Xaaladdan, dib u noqoshada Raster waxay taageertaa qaababka 86 iyo 41.
Khasaaruhu waa cad, fajignaankeenna weyn ee faylka, kadibna wuxuu noqon karaa.
Tag jiliga MyGeodata
Post Previous«Previous Drones loo isticmaalo rayidka Professional, photogrammetry in daqiiqo.
Post Next OpenGeo Suite: Tusaale weyn oo ah GIS Software oo ku fekeraya daciifnimada qaabka OSGeoNext »
2 Jawaab ah "Qalabaynta online-ka ah ee loogu talagalay xogta GIS - CAD iyo Raster"
Hi Nelly. Macluumaad noocan ah ma lihin.
Nelly Pérez Méndez isagu wuxuu leeyahay:
Ku salaamayaa dadka oo dhan,
Waxaan doonayay inaan ogaado haddii aad haysatid xogta dijitaalka 'Digital Terrain Model (MDT)', oo ay ku jiraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan heerarka dhulka. Gaar ahaan degmooyinka Tegucigalpa, Honduras.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha dakhliga.
Haddii ay iibiyaan mitir labajibbaaran ama saldhigga oo dhan ee degmada kor ku xusan.
Waxaan u mahadcelinayaa macluumaadka la codsaday.